WARBIXIN:- Shacabka reer Muqdisho oo bilaabay inay gaarigooda iska iibiyaan kadib cabsi soo food-saartay – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
WARBIXIN:- Shacabka reer Muqdisho oo bilaabay inay gaarigooda iska iibiyaan kadib cabsi soo food-saartay
Waxaa muddooyinkii ugu dambeeysay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya kusoo batay dadka dib isaga sii iibinaya baabuurta ay sida gaarka ah u leeyihiin, kadib markii ay magaalada kusoo bateen qaraxyada lagu xiro gaadiidka sida gaarka ah loo leeyahay.
Dadka ku nool magaalada Muqdisho ayaa sanadihii ugu dambeeyay si aan caadi ahayn u gadanayay gaadiidka nooca raaxadda ah, iyadoona bilooyinkii ugu dambeeysay dekedda magaalada Muqdisho lagala soo degay boqolaal kun oo gawaari ah.
Qaar ka mid ah dadkii sida aadka ah u iibsanaayay gaadiidka ayaa qaarkood waxay durbadiiba bilaabeen inay dib isaga sii iibiyaan gawaaridooda, si ay uga bad-baadaan qaraxyada rakibka ama dhejiska loo yaqaano ee baabuurta lagu xiro.
Dadkaasi ayaa sheegay sababaha ay isaga sii iibinayaan gawaaridooda ay tahay inaanay iyaga iyo hantidooduba hal-meel ku wada dhiman karin, islamarkaana ay door-bideen inay gaadiidka shacabka ah iska raacaan.
Qof kasta oo haatan gaari leh wuxuu ku qasban yahay in maalintii uu dhowr jeer qaraxyo ka fiiriyo gaarigiisa, si uu u xaqiiqsado inaan gaarigiisa qarax loogu xirin.
“Mar allaale markii aad meel yar dhigato gaarigaada, waxaa ku qasban tahay kahor inta aadan soo raacin inaad gaariga hoos ka gasho, kana fiiriso in qarax laguugu xiray iyo inkale.” Sidaasi waxaa yiri mid ka mid ah dadka degan magaalada Muqdisho oo warbaahinta Bulshoweyn la hadlay.
Si kastaba ha ahaatee, tan iyo markii la doortay madaxweyne Maxamed C/laahi Farmaajo waxaa muuqata inay Al-shabaab culeys xoogan saartay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya, waxayna magaaalada kusoo kordhiyeen qaraxyada iyo dilalka qorsheeysan oo ay ka geysanayaan.